Eoropa - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Eropa
Firenena fitsangatsanganana tsy misy visa ho an'ny Alemanina
Jona 27, 2021 Shubham Sharma Germany
Mifanaraka amin'ny safidin'ny mpandeha malalaka ataon'izy ireo, ny Passport Index no laharana iraisam-pirenena an'ny fanjakana. Miankina amin'ny isan'ny firenena mety ahatongavan'ireo tompony ny dia tsy mandeha visa, ity fitaovana ity dia manome isa ny pasipaoro manomboka amin'ny 193 (amin'ny 2021). Ny toe-javatra ao
Zavatra tiorka tsara indrindra hanafarana endrika Amazon
Jona 11, 2021 Maitri Jha Travel, vorontsiloza, zavatra vidiana
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Soeda? Tari-dalana haingana ho an'ny olona mitady asa.
Enga anie 26, 2021 Shubham Sharma asa, Soeda
Suède dia firenena skandinavianina misy nosy amoron-tsiraka an'aliny sy lalan-drano rano velona ary ala be karana ary tampon-tampon'afo. Stockholm, renivohitra Suède, atsinanana sy Gothenburg ary Malmö, dia tanàna amorontsiraka rehetra
Enga anie 20, 2021 Antika Kumari Gresy, asa
Raha olom-pirenena amerikanina, kanada ianao, na olom-pirenena tsy eropeana ary mikasa ny hifindra any Greece, dia tsy maintsy fantatrao fa ny permis miasa grika dia misy fiainana sy asa any Greece. Ka alohan'ny hitadiavana asa ao
Zavatra be fividianana amin'ny AliExpress
Enga anie 7, 2021 Maitri Jha Sinoa, Espaina, rohy mahasoa, zavatra vidiana
AliExpress dia nitombo ho iray amin'ireo tranonkala fiantsenana malaza indrindra amin'ny Internet, izay manolotra entana marobe amin'ny vidiny ambany be. Izy io koa dia manana ny safidin'ny vokatra lehibe indrindra amin'ny tranokala miantsena an-tserasera hafa. Ny sokajy tsirairay dia misy an-jatony
Borosy nify elektrika tsara indrindra any UK
Enga anie 6, 2021 Maitri Jha UK, zavatra vidiana
Na dia borosy nify mahazatra aza dia manao asa tsara amin'ny fanadiovana ny nifinao. Dia maninona ianao no mila borosy nify elektrika hanadiovana ny nifinao? Ny borosy nify elektrika dia mandaitra sy feno kokoa. Ny borosy nify elektrika dia hanampy anao hanala hatramin'ny